Afhayeenkii Ikhwaan al-Muslimiin oo lagu xidhay Masar - BBC Somali
Afhayeenkii Ikhwaan al-Muslimiin oo lagu xidhay Masar
Image caption Kacdoonka Ikhwaanka Masar
Bileyska dalka Masar ayaa xidhay Salaasadii Jihaad al-Xaddaad oo ah afhayeenka ururka Ikhwaan al-Muslimiin oo u qabilsan luqada Ingiriiska. Warbaahinta Masar waxay sheegtay in Jihaad al-Xaddaad iyo sarkaal kale oo ka tirsan isna ururk Ikhwaan al-Muslimiin in laga soo qabtay dabaq ku yaal magaalada Qaahira.
Sababah loo xidhay afhayeenkan, warbaahinta Masar waxay ku sheegtay in uu sameeyey kicin dadweyne, isaga iyo badhsaabkii hore ee gobolka Qalyuubiya Xussaam Abu Bakri. Jihaad al-Xaddaad waxa dhalay nin hore ugu ahaan jirey la-taliyaha xagga arrimaha debadda ee Maxamed Mursi, Cissaam al-Xaddaad
Image caption Xukunnada Ikhwaanka
Ilaa iyo intii milateriga dalka Masar uu xukunkii ka tuuray dawladdii Ikhwaanka ee Maxamed Mursi bishii July ee sannadkan, waxa jirey olole weyn oo lagu qaaday isla ururkaasi oo la soo xidhxidhay siyaasiyiin badan oo ka tirsanaa madaxdooda.
Waxa kale oo la fadhiisiyey hanti badan oo ay lahaayeen xubno ka tirsanaa ururkaasi iyo urur kale oo lagu tilmaamay inuu xagjir ahaa oo la odhan jirey Jamaacat al-Islaamiya. Waxa kale oo la xaddidey dhaqdhaqaaqa hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee Ikhwaanka, Maxamed Badiici.